Semalt Expert: Ungachengetedza Sei Ma Spam Mails?
Kuzivisa kuparadzirwa kwemashoko kune zviremera zvakakosha ndeimwe yenzira dzakakosha dzekuvhiringidza vatengesi uye kudzivirira kushanduka kwemhosva. MuUnited States, National Fraud Intelligence Bureau inobata mabasa ekuunganidza uye kuongorora dhepfenyuro pamusoro pevhesi yevhesi uye mhosva dzakadaro. Izvi zvinobatsira kuzivisa kugadzirisa zvisarudzo zvakanyanya pamusoro pezviito zvekudzivirira zvinofanira kutorwa - australian outback style hat.
Dzokera kune mazano akataurwa naRyan Johnson, Mutungamiri Mukuru Wekutsvaga Semalt , uyo anoziva zvokuita pamusoro pekutumira mameseji.
Kuzivisa kuparadzirwa kwemasmail
Unogona kuzivisa zviremera zvakakosha pamusoro pekutsvaga mameseji wawakagamuchira nenzira dzakawanda. Izvi zvinosanganisira kuonana neRoy Mail kana kambani iri kuenzaniswa nevanyengeri.
Dhidzai mhinduro ye mail kune Royal Mail
Royal Mail ndiyo tsamba uye mapoka ekugovera basa. Inoshanda nehurumende dzakakosha kudzivirira kuparadzirwa kwemasmail kubva kupinda muhofisi yepositi. Kana iwe kana munhu waunoziva anogamuchira tsamba yekutsvaga, Royal Mail inokurudzira kuti iwe utumire tsamba iyo netsamba yekunyora kune ino kero:
P.O. Bhokisi 797,
Unogonawo kudana Royal Mail nomusi wa345 611 3413 kana kutumira email kune scam.mail@royalmail.com.
Royal Mail inokurudzirawo vanhu vakagadzikana kuti vapedze Scam Mail Report (inowanika pakunyorera pawebsite yavo) uye inoitumira pamwe chete nemakero anogamuchira kubva kune vanonyengedza nemamwe magwaro kana zvigadzirwa zvinopomerwa kuti zvakabva kune scammers.
Imwe nzira yekuzivisa kuparadzirwa kwemasmail ndeyokutumira zita rako rakazara, kero uye nhare yerunhare nepositi kuenda kukero yepamusoro yepamusoro, ne email kana nefoni (03456 113 413). Royal Mail ichakutumira fomu uye kubhadharwa kwakataurirwa envelope kuitira kuti mushure mekuzadza fomu iwe uitumire nayo sampuli ye scam mails yakagamuchirwa..
Kana iwe ukagamuchira sms mail kubva kuvanyengeri vachizvifananidzira kuva vamiririri vekambani chaiyo, kuchenjera kuonana nekambani.
Inogona kunge iri bhangi kana dhipatimendi rehurumende iri kuenzaniswa uye inotaurwa mumashoko ekutumira. Kuzivisa sangano iro richabatsira sezvo richigona kuzivisa vamwe vanhu pamusoro pezvakaipa. Mamwe makambani akaisa maziso pawebsite dzavo uye anotsanangura matanho aanofanira kutora kana vakawira muchengeti.
Emails ndiyo dzimwe nzira dzakakurumbira dzinoita kuti vanhu vanyengedze zvirongwa zvisiri pamutemo. Kana ukacherechedza dambudziko re email mubhokisi rako rekunyora, iva nechokwadi chokuti unozvizivisa.
Usati watarisa pane zvingasarudzwa zvaunenge uine apo iwe unogamuchira scam email, ngatitangeiongorore mazano mashomanana achachengetedza iwe nemashoko ako kuchengeteka. Apo unogamuchira scam email:
KUSAI KUSUNGA KUNYANYA KUNYANYA.
Usapindura email kana taura nemutumwa chero ipi zvayo.
MUSA kupa chero ruzivo chero rupi zvaro kana iwe wakatotanga kuvhara.
USATANGA kuvhara chero zvinyorwa mu email.
Kuzivisa kuparadzirwa kwe email kune Royal Mail
Royal Mail inotanga kurwisana ne-scam emails kuburikidza nekupa rwandu rwemashoko epamusoro epamayuta ekubetsera kuti uone maitiro emafaira e-scam. Kana ukawana email inoshungurudza, unogona kutumira Royal Mail kuburikidza nepeji rekutsvaga kwekambani kana kuti "Taura nesu" link pazasi kwemawebhu web site.
Kuzivisa scam email ku email yekambani
Tsvina ma email kana phishing emails anogona zvakare kuIP (Internet Service Provider) iyo yakashandiswa kupedza email. Semuenzaniso, kana email ichibva kubhuku re Gmail, unogona kuiudza uchishandisa bhora re "Report Spam" pane peji reGmail. Yahoo ine email (abus@yahoo.com) iyo iyo mashoko pamusoro pe scam emails nezvimwe zvinopomerwa zvakaipa zvakataurwa. Hotmail yakapa 'Bhuku rekuita phishing' kwechinangwa chimwechete.
Kuzivisa kuparadzirwa kwema-mail ne emaimeri munguva yakanaka hazvikwanise kusimbiswa. Pane imwe nguva apo zvikwangwani zvakarurama, zvakasara uye nechepakati, mumwe haagoni kukwanisa kufunga kuti zvinhu zvose zvakanaka. Muhondo yekurwisana nevanyengeri, zvakanaka kuti uite zvekunyengedza uye kuti usavimba nehutano hwemaziso hwemashoko kubva kumamasha kana kumfonhare.